Barmaamijka Guulaystayaal Geeddiga Wadaay Waday Qeybtiisa 4-Aad – WARSOOR
Sida aynu ka warqabno, waxyaalaha la keeno Waddankeena Waqtigan waxa ka mid ah Mar-Marka Dhulka iyo Gidaradda la dhigo, oo waxa lagu beddelay Sibidhkii Daradda iyo Qoloka Gudaha la dhigi jiray. Waxana ad badankiinu igu wafiqikartan in marka horeba aynu sameysan karno Warshado yaryar oo inoo sameeya Marmarka, iyadoo aynu Buuraheena iyo Ciideenaba ka helayna Macdanta laga sameeyo Marmark. Waxaynu ku qasbanahay, inaynu ka wada foojignaano waxan aad Guryaheena aynu ku qurxinayno ee khasaare inoo keeni kara. Haddaba, inagu Dal iyo Dadahaanba ahaanba kama aynaan fikirin arrintaasi, laakiin waxa la keenaa waddankeenna Mar-Marka Dhulka la dhigo oo aad Tayadiisu u hoosayso una liidato. Waxaana maalin walba dhacda waddankeena in dad ay ku dhintaan amma ku jajaban amma ku naafoobaan, gaar ahaan Dadka waa Weyn oo ku waxyeelooba marka ay musqulaha ku maydhanayaan ama ay Daarada ku weysanayan, Waana Waxyeelooyin joogta ah, oo Maalinba maalinta ka dambaysa ku sii badanaya waddankeena Gobol kasta.Sidoo kalenaa uu Marmarkaasi yahay mid Qolsal ku Jab ah oo aan Cimri Dheer aan laheyn,gaarahaan ka dhulka la dhigo.
Haddaba, Iswaydiintu waxay tahay, waa maxay Mudashada Dhibta iyo khasaaraha Mar-Marka Dhulka la dhigaa keeno oo Waddankeenu, oo Boqolaal qof ku waxyeeloobaan iyo Wax ka qabad la’aanteeda. Jawaabtu waxay sida kuwa badan oo inaga mid ahi ay garawsan yahiin, inay tahay Xagal Daac ku imanayaa Xooggii dihnaa ee wax-soo-saarku ku wajahnaa, iyadoo oo uu gaabis ku imanayo horumarkii waddanka. Sidoo kale, Daawaynta qofka ku jaba Mar-marku waxay inagu kacaysa kharash badan oo lacag adag ah, oo aan imika aynan dabooli karayn baahida Dawooyinka iyo Qalabka dadkaasi u baahan yihiin. Sidoo kale, Xanaanaynta iyo Dhowridda Qofka Buka waxay ku qadanaysaa waqti badan oo uu uga faa’iidayn lahaa waddanka iyo naftiisaba qof hawshaasi gudanaya. Ta labaad waxa dhibaatadaasi keenay baal-marka Maamul-wagnaagii xakamayn lahaa Tayada Mar-Marka Waddanka la keenayo, oo joojin lahaa kan khasaarihiisu badan yahay, isla markaana ku khasbi lahaa Ganacsatada inay keenaan Mar-Marka Xanafta leh ee ka Dowada u ah Simbiriraxashada ay Dadweynuhu ku jaban ama lafaha,Murugayada khatar ku soo gaadhsiiya. Sidoo kale, Maamul-wanaaggaasi wuxuu Ciqaabi lahaa Ganacsatada Arxan-layaasha ah ee Waddanka ku soo daabulaya wax kasta oo aan faa’iido lahayn khasaare mooye, inkasta oo ay jiraan Ganacsato badan oo Waddanka u naxa oo keena wax faa’iido leh, isla markaana waxa kor soo mari lahaa Ganacsatada Dadkooda u naxa, oo keeni lahaa Mar-marka Adduunka laga isticmaalo ee Tayadiisu fiican tahay ee lagu badbaadayo.